﻿Zimbabwe Cricket Team Hits Fresh Low
Home » Sports » ﻿Zimbabwe Cricket Team Hits Fresh Low
The Zimbabwe national cricket team sunk to a new low after suffering a 100-run defeat to Afghanistan to share the One-Day International series in Bulawayo.
Zimbabwe won the first two matches but Afghanistan hit back with a win on Tuesday which they followed up with a comprehensive triumph yesterday to level the series.
Zimbabwe captain Brendan Taylor won his last toss as ODI captain, with Elton Chigumbura set to take over, and elected to field.
Afghanistan accepted the invitation to bat gracefully, posting a competitive 259 on the board with Zimbabwe’s attack, devoid of seamer Tendai Chatara struggling to peg the tourists back.
After the win on Tuesday Afghanistan claimed that they had rested some of their top players to give a chance to new ones, and despite Zimbabwe resting Hamilton Masakadza, Chatara and spinner Utseya for yesterday’s final match, the result will not be less embarrassing for the home side.
Off-spinner Sharafuddin Ashraf took three wickets as Zimbabwe were bundled out for 159 in 38 overs as Afghanistan recorded their biggest ODI win in runs.
Their only other victory against a Test playing nation in this format before Zimbabwe was against Bangladesh.
It could have been worse for Zimbabwe who had to climb back from 26-6 at one stage, with debutant Richmond Mutumbami hitting a half century.
With South Africa coming next for a one-off test and an ODI series before the tri series that also involves Australia, Zimbabwe are left with some soul-searching, if not witch hunting, to do.
Taylor, Regis Chakabva, Sean Williams, Malcolm Waller and Chigumbura all recorded single digit run-totals before Mutumbami knuckled down to try avert total disaster. Mutumbami hit eight fours in his 75-ball 64.